शेयरबजारको १२ अर्ब कता हरायो ?
आर्थिक परिसूचक ओरालो लागेको अवस्थामा नेपालको शेयरबजारले भने निकै गति लियो । निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि ३० करोडको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको शेयरबजार बढ्दै दैनिक कारोबार रकम १८ अर्बसम्म पुग्यो । केही दिन २० अर्बको हाराहारीमा पनि कारोबार भयो । अहिले ६ अर्बको हाराहारीमा आएको छ । १२ अर्ब कारोबार रकम कता हरायो ? यसका लगानीकर्ता कहाँ हराए ? के ठूला कारोबारीहरू मुनाफा सोहोरेर बजारबाट बाहिरिएका हुन् ? अथवा बजारमा कालो धन आएका थियो ? विगतको बुलिश बजारमा पनि यस्तै भएको थियो । ऐतिहासिक उचाइमा पुगेका बेला ठूलो कारोबार हुने र ओरालो लागेपछि कारोबार रकम ≈वात्तै घट्ने गरेको थियो । अहिले पनि यस्तै स्थिति देखा पर्दै छ ।
बजार एक्कासि ओरालो लाग्दा धेरैजसो नयाँ लगानीकर्ताहरूमा त्रास उत्पन्न भएको छ। कतिपय लगानीकर्ताले त घाटामा पनि शेयर बेचेका छन् । तर, विगत केही वर्षदेखि शेयरबजारमा सक्रिय भएर लगानी गर्दै आएको लगानीकर्ता भने अहिले राम्रा कम्पनी किन्ने दाउमा छन् ।
दैनिक १८ अर्ब कारोबार हुने बजारमा अहिले ५–६ अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । बजार साथै कारोबार रकम यसरी घट्दा धेरैजसो लगानीकर्तालाई बियर शुरू भयो भन्ने पनि लागेको छ । त्यसैले बजार घट्दा धेरै लगानीकर्ताले प्यानिक सेल पनि गरेको पाइयो ।
शेयरबजारले अहिले लगानीकर्ताको धैर्यको परीक्षा गरेको देखिन्छ । धेरै कारोबार भएको भए बजार बढ्ने निश्चित थियो । तर, कारोबार घट्दै गएकाले बजार पनि अनिश्चित बनेको छ ।
नयाँ लगानीकर्ता अहिले बजारबाट आत्तिएको पनि पाइन्छ । लहैलहैमा लगानी गर्नेहरू यसरी आत्तिएका हुन् । तर पनि अकस्मात् १२÷१३ अर्बका कारोबार घट्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । बजार निकै घटेको पनि छैन । सामान्य करेक्शन हुँदैमा त्यति ठूलो कारोबार घटेर ५÷६ अर्बमा नआउनु पर्ने हो । आखिर लगानीकर्ता बाहिरबाट पक्कै आएका होइनन् । कहाँ गए त ती लगानीकर्ता र त्यो लगानी रकम ?